Freshworks: Modely fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po marobe amin'ny Suite iray | Martech Zone
Amin'izao vanim-potoana dizitaly izao, niady tamin'ny Internet ny ady ho an'ny habaka marketing. Miaraka amin'ny olona marobe an-tserasera, ny famandrihana sy ny varotra dia nifindra avy amin'ny toerany nentim-paharazana ka hatrany amin'ireo vaovao nomerika. Ny tranokala dia tokony ho eo amin'ny lalao tsara indrindra azony ary jerena ny volavolan-tranonkala sy ny traikefan'ny mpampiasa. Vokatr'izany dia lasa manakiana ny fidiram-bolan'ny orinasa ny tranonkala.
Raha jerena io scenario io dia mora ny mahita ny fomba fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po, na CRO araka ny fantatra, dia nanjary fitaovam-piadiana manan-danja amin'ny arsenalin'ny tsena rehetra. CRO dia afaka manamboatra na manapaka ny fisian'ny marketing sy ny tetika an-tserasera an'ny orinasa.
Fitaovana CRO marobe no hita eny an-tsena. Ny olana anefa dia mbola tsy mandaitra ny CRO. Ny evolisiona amin'ny teknolojia dia tsy hita taratra amin'ny fomba fanatanterahantsika ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po.
Ny asa fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po dia asa sarotra. Ity misy tranga mahazatra:
Ny mpivarotra dia tsy maintsy mampakatra ny pejy miaraka amin'ilay fitaovana voalohany. Manana kafe izy ary manamarina ny mailany rehefa feno ny pejy. Avy eo, manomboka manao ny fanovana eo amin'ny pejy. Ary avy eo dia mila mandray ny fanampian'ny ekipany teknolojia izy mba hanovana eo amin'ny tranokalany. Ary avy eo, manao fitsapana izy hanamarina raha toa ka ahasoa azy ireo ny singa rehetra ao amin'ilay pejy. Raha tsy izany dia manomboka indray izy, manomboka amin'ny famoahana ilay pejy, ary manana kafe hafa izy. Raha lazaina amin'ny fomba mahitsy, dia mbola mijanona amin'ny fahazarana narahina izy rehefa nampidirina ny fanatsarana ny tranokala - Ary toy izany koa ny sisa amintsika. Tsy mbola nisy zava-baovao lehibe tao amin'ny CRO, mampihomehy.
Na izany aza, manana valiny i Freshworks. Fresh Marketer (Zarget teo aloha) dia natsangana tamin'ny taona 2015 mba hitondrana fanavaozana ao anaty indostria izay tsy nahita fandrosoana lehibe teo amin'ny famoronana nandritra ny taona maro ary nanapotika ny fiankinan'ny mpivarotra amin'ny mpamorona hanatsara sy hitantana fitsapana efa nisy teo aloha.
Ireo orinasa mitady hanatsarana ny taham-pitan'ny tranokalany dia tsy maintsy miankina amina karazana modely marobe hanatratrarana ny tanjon'izy ireo, ary hividy vokatra rindrambaiko marobe amin'ny fampielezan-kevitra tokana - Misy zavatra tadiavin'ny Freshmarketer iray amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo modely fanatsarana marobe amin'ny vokatra rindrambaiko tokana. , amin'izay dia hofoanana ny filana mijery lavitra kokoa hamita ny fizotrany.
Raha atao teny hafa, ny fanatsarana farany-amin'ny-farany dia azo atao izao, amin'ny fampiasana vokatra rindrambaiko iray monja - antsoina hoe ny Suite CRO. Ny ekipan'i Freshmarketer dia tia mieritreritra ny fiovam-po ho toy ny fizotran'ny bisikileta fa tsy amin'ny laharana iray, izay misy angona avy amin'ny tranokala manome fomba fijery, izay ampiasainao hananganana petra-kevitra, izay ampiasainao ho fototry ny fanatsarana, izay manome tahirin-kevitra bebe kokoa - Ary ny fihodinana manaraka manaraka ny tsingerina.
Ny vahaolana tokana an'i Freshmarketer dia ao amin'ny plugin Chrome azy, ary ao amin'ny efitrano fivadihan'izy rehetra. Ny plugin Chrome voalohany indrindra amin'ny indostria dia nanamora ny fitsapana sy ny fanatsarana ny pejy fizahana, izay tsy voafetra teo aloha. Voafetra ny fitaovana fanatsarana nentim-paharazana satria nitaky ny hampiasan'ny mpampiasa ny pejin'izy ireo tamin'ny tranokala hafa. Izany dia nateraky ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana ary midika koa fa ireo fitaovana ireo dia manana fetra lehibe amin'ny zavatra azon'izy ireo atao. Na izany aza, ny ekipan'i Freshmarketer dia nandalo ireo fetra rehetra ireo. Ny efitrano fiovam-pony rehetra dia misy Heatmaps, A / B Testing, ary Funnel Analysis miaraka.
Ireto misy zavatra mahafinaritra azonao atao amin'ny Freshmarketer:
Manatsara sy manandrana pejy avy hatrany amin'ny browser-nao, miaraka amin'ny Plugin Chrome an'i Freshmarketer.
Jereo ny tatitra momba ny angona mivantana - Fahatakarana ny fotoana sy ny fotoana hisian'ny fifandraisana. Tsy misy sary intsony.
Mampiasà matanjaka maro Modely CRO miaraka amina vokatra iray monja.
Araho ny tsindry amin'ny singa tranonkala mifandraika.
Ataovy miavaka ny URL mora, miaraka amin'ny fanampiana kely indrindra avy amin'ny ekipa teknolojia anao.
Get vahaolana mitambatra rehefa mihazakazaka maoderina tsirairay ianao. Anisan'izany ny fanandramana A / B amin'ny heatmaps namboarina.
Ny fizotran'ny tsingerin'ny fanamafisana natolotry ny Freshmarketer dia manomboka amin'ny famakafakana ny fantsona. Ny famakafakana ny fantsona dia eo am-panandramana andiam-pejy izay manompo ho toy ny làlan'ny fiovam-po hijerena ny toerana ivoahan'ny mpitsidika amin'ny fantsona. Manampy anao hahafantatra ny fomba fifandraisan'ny mpitsidika amin'ny tontolon'ny fiovam-po lehibe kokoa io.
Manaraka izany, miroso amin'ny fampiasana heatmaps ianao, izay ampifandraisina amin'ny famakafakana ny fantsona. Heatmaps dia fanehoana an-tsary ny angona angon-drakitry ny tsindry pejy. Mampiseho aminao ireo singa ao amin'ny tranokala izay tsy mahomby izy ireo, ary ny faritra aiza amin'ny tranokalanao no mila amboarina. Rehefa avy nianatra izay midina izy ireo, mianatra ianao Nahoana midina izy ireo.
Raha vantany vao hitanao ireo singa sy pejy malemy kokoa dia afaka miroso amin'ny dingana farany ianao - fitsapana A / B. Na izany aza, alohan'ny hanombohanao fanandramana A / B dia tsara kokoa ny mamorona hypothèse mivaingana hijerena. Ny hypothheses ho an'ny fitsapana A / B dia tokony hiorina amin'ny fahitana avy amin'ny fitsapana nataonao taloha. Ny fitsapana A / B dia ny fanovana atao amin'ny pejy iray ary tehirizina ho toy ny variant. Ny fifamoivoizana ataon'ny mpitsidika dia mizara roa amin'ireo karazany roa ireo, ary ilay manana fandresena «mandresy» tsara kokoa.
Ary vantany vao tavela amin'ny kinova tsaratsara kokoa amin'ny tranokalanao ianao dia manomboka ny tsingerina indray ianao!
Nampiasa Freshmarketer tao amin'ny pejinay fisoratana anarana izahay, ary nanamboatra azy io miorina amin'ny fitsapana natao tamin'ny angona voaangona tamin'ny fampiasana Freshmarketer, izay nanatsara ny fisoratana anarana 26% tao anatin'ny telo andro. Shihab Muhammed, BU Head ao Freshdesk.
Raha ny fanadihadiana sy ny fandinihan'ny manam-pahaizana momba ny indostria, ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po dia vonona hahita fitomboana lehibe amin'ny taona ho avy satria mihamaro ny mpivarotra manome lanja ny CRO amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Raha jerena ny fahaizany miovaova, mora ampiasaina ary endri-javatra tsy manam-paharoa, napetraka tsara i Freshmarketer hanararaotra ireo fivoarana eny an-tsaha.
Fresh Marketer maneho ny fivoaran'ny fivoarana miandalana amin'ny fomba ahafahan'ny orinasa manatsara ny fiovam-po ary hahita lalindalina kokoa ny zava-bitan'ny tranonkala. Diniho ny fandrosoana miadana amin'ny indostrianay raha ampitahaina amin'ny indostrian'ny mozika, izay nifindra haingana avy amin'ny firaketana ka hatramin'ny CD, tamin'ny iPods, ary tamin'ny farany, tamin'ny streaming. Ny plugin Chrome anay dia dingana manaraka ao amin'ny CRO ary maneho ny hoavin'ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po, noho ny ezaka ataontsika mba hahatonga azy io tsy hanjary sy mahomby kokoa amin'ny fampidirana ireo modely fanovana isan-karazany. Manantena ny fananganana haingana isika satria ny filàna sy ny tetibola ho an'ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po dia mitombo manerantany. Ny orinasam-barotra E-commerce sy SaaS dia hahatsapa avy hatrany ny tombony azo amin'ny fananana suite tokana ho an'ny heatmapping amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny A / B sy ny fitsapana ny fantsona.
Andramo maimaimpoana i Freshmarketer
Tags: ab testingChrome pluginfanavaozana fiovam-pofanatsarana ny tahan'ny fiovam-poCrocro suitefreshmarketerfreshworksfandalinana cornelgoogle chromeplugin chrome googlefanaovana sarintany hafananasarintanin'ny hafananaheatmappingsarintany hafananafitaterana angona mivantanatatitra momba ny angona mivantanaOptimizationfizahana URL misarakatsindriozarget
Arvind no CEO & mpiara-manorina ny Zarget, izay ankoatry ny famolavolana ny vinan'ny orinasa sy ny fanamoriana ny fizotran'ny hetsika hahatratrarana ny tanjon'izy ireo, dia mitantana ny varotra vokatra, presales ary ny varotra. Mpiasa taloha tao amin'ny Zoho izay nitondrany ny varotra vokatra ho an'ny vokatra lohan'ny ITSM, i Arvind dia nahazo hevi-dehibe tamin'ny indostrian'ny SaaS sy ny 'Marketing' rehetra. Arvind dia nalaina avy amin'ny traikefa lehibe nananany mba hampandeha ireo orinasam-pandrosoana. Izy koa dia mpankafy an'i Chelsea.
Vatofantsika: Podcasting maimaim-poana, mora, mora namana
Ampifanaraho: ny refy amin'ny marketing amin'ny finday sy ny sehatra fisorohana hosoka